စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၆ ) ( “ဝ” ဟာ တိုင်းရင်းသားလား ??? ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၆ ) ( “ဝ” ဟာ တိုင်းရင်းသားလား ??? )
Posted by Foreign Resident on Jan 25, 2013 in Creative Writing, Think Different | 34 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၆ )
( “ဝ” ဟာ တိုင်းရင်းသားလား ??? )
ဒီရက်ပိုင်း ၊ “ဝ” တွေနှင့် ၊
ပါတ်သက်ပြီး ၊ အဘ ၊
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် နှင့် ၊
ကိစ္စလေး တစ်ခုပါ ။
ကုလားပြည်နှင့် နီးတဲ့နေရာတွေက လူတွေက ကုလားသွေးစပ်မှာပေါ့ ။
ကုလားပြည်နှင့် နီးတဲ့နေရာတွေက လူတွေက ကုလားစကား ပြောမှာပေါ့ ။
အခု ဝ တွေက ၊ တရုတ်ပြည်နှင့် နီးတဲ့အတွက် တရုတ်သွေးစပ်မှာပေါ့ ။
တရုတ်ပြည်နှင့် နီးတဲ့အတွက် တရုတ်စကား ပြောမှာပေါ့ ။
ဒါတွေက ပုံမှန်ပဲလေ ၊ ဘာမှမှ မထူးခြားတာ ။
လူတွေဆိုတာကတော့ ဒီလိုပဲ ဟိုဘက် ဒီဘက် ကူးလူး ဆက်ဆံနေတာပဲလေ ။
ဗမာစကားပြောမှ ၊ ဗမာလူမျိုးဖြစ်မှ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လက်ခံမယ်ဆိုရင် ၊
စ ကတည်းက ဗမာစကားပြောတဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေနေတဲ့ နေရာကိုပဲ ကွက်ပြီး ၊
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုပြီး သတ်မှတ်ခဲ့ပေါ့ ။
ဘာလို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် နေခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပါ ၊
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုပြီး နယ်နမိတ်ထဲ ထည့်ခဲ့ရတာတုန်း ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် ဝါဒဖြန့် ကျောင်းသင်္ခန်းစာတွေကြောင့် ၊
( တကယ့် ပညာ အစစ်ကိုလည်း မတတ်ဘဲ ၊ အတွေးအမြင်တွေလဲ ပိတ်နေခဲ့တဲ့ )
လူ အများစုကြီးက မှိုင်းမိနေတာပါ ။
မသိလို့ မေးပါရစေ ၊
တိုင်းရင်းသားတွေ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေလာခဲ့တဲ့မြေတွေကို ၊
ဗမာတွေက ပိုင်ပါတယ်လို့ ၊ ဘာကြောင့် ထင်ရပါသလဲ ။
တိုင်းရင်းသားတွေ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေလာခဲ့တဲ့မြေတွေပေါ်မှာ ၊
ငါက အစိုးရကွ ၊ ငါက အင်အားကြီးတယ်ကွ ဆိုပြီး အတင်းသွားဆွဲခဲ့တဲ့ ၊
( တည်လဲ မတည်မြဲတဲ့ / ခေတ်အဆက်ဆက်မှာလဲ ပြောင်းနေတဲ့ )
စိတ်ကူး မျဉ်း Imaginary Line တွေပါ ။
အဓိက က ၊ အဲဒီမြေ ကို အဲဒီမြေမှာဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေလာခဲ့တဲ့ ၊
တိုင်းရင်းသားတွေ ကသာ ပိုင်ရှင် အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနှင့် ။
သူတို့ကို ပြည်ထောင်စုထဲမှာ အတူပူးပေါင်း နေစေချင်တယ်ဆိုရင် ၊
သူတို့ ကို အတူပူးပေါင်းချင်စိတ်ပေါ်အောင် ဆွဲဆောင် / ချော့ခေါ်ရမှာပေါ့ ။
တရုတ်စကားပြောတဲ့သူအချင်းချင်းမို့ ၊ နယ်ချင်းကလည်း တစ်ဆက်ထဲရှိနေလို့ ၊
” ဝ ” တွေက တရုတ်တွေ နှင့် နီးစပ်တာ ” ဝ ” တွေ အပြစ်မှ မဟုတ်ပဲလေ ။
မှန်တာပြောရရင် ကိုယ်တွေသာ ကချင် လူမျိုး ၊ ဝ လူမျိုး ဖြစ်ရင်လည်း ၊
တရုတ်ပြည်နှင့် ပေါင်းဖို့ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမိမှာပါ ။
တရုတ် နိုင်ငံထဲက ကချင် လူမျိုး ၊ ဝ လူမျိုး တွေ ၊
ဘယ်လို ကောင်းကောင်း မွန်မွန် နေနေရတယ်ဆိုတာ ၊ ကိုယ်တွေလဲ သိနေရတာပဲလေ ။
ထားလိုက်ပါတော့ ၊ အဲဒါက အဘ Personal ခံစားချက်ပါ ။
ထားပါတော့ ၊ ” ဝ ” တွေကို မကြိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်လေ ။
” ဝ ” တွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ လက်မခံချင်ရင်လည်း ရပါတယ်လေ ။
” ဝ ” တွေကို ပြောလိုက်ပေါ့ ။
နင်တို့ ” ဝ ” တွေ နှင့် နင်တို့နေတဲ့ ဒေသ တွေကို ၊
ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လက်မခံနိုင်တော့ဘူး လို့ ။
နင်တို့ ” ဝ ” တွေ လွတ်လပ်ရေးပဲ ကြေငြာချင် ကြေငြာ ။
ဒါမှမဟုတ် တရုတ်ပြည်ထဲပဲ ပေါင်းပေါင်း ၊
ကြိုက်သလိုသာ လုပ်ကြတော့လို့ ။
အဘ အထင် ၊ ” ဝ ” အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား အားလုံး ၊
မြန်မာပြည်မကြီးကနေ ဝမ်းသာအားရ ( ဝမ်းသာအားရ ) ထွက်သွားကြမှာပါ ။
မမေ့အောင် ၊ ထောက်ပြချင်တာ တစ်ချို့ရှိပါတယ် ။
ပထမ အချက်က ။
မြန်မာပြည်မှာ ရှိရှိသမျှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး အားလုံး က ၊
( လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတဲ့ နာဂ လူမျိုးက အစ )
ဗမာ အစိုးရကို အင်အားချင်း ဘယ်လိုမှ မယှဉ်သာမှန်း သိပေမယ့် ၊
အသက်စွန့်ပြီး ၊ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ၊
လက်နက်ကိုင် တော်လှန် ပုန်ကန်နေကြတာဟာ ၊
ဘယ်ဖက်က မှားနေလို့ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ၊
သေသေချာချာလေး စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ကွယ် ။
နောက် ဒုတိယ အချက်က ၊
အခု အချိန် အထိ မြန်မာပြည်မှာ ၊
ပညာတတ် ၊ အမျှော်အမြင်ကြီး ၊ ရိုးသားပြီး ၊
ဗမာ လူမျိုး စစ်စစ် ၊ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်မှာ သံသယဖြစ်စရာမလိုတဲ့ ၊
ပြည်သူလူထုကလည်း တစ်ခဲနက် လှိုက်လှိုက်လဲလဲ ထောက်ခံတဲ့ ၊
အမျိုးသား အဆင့် ခေါင်းဆောင် ဆိုလို့ နှစ်ယောက်ပဲ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် ဒေါ် အောင်ဆန်း စုကြည် ပါ ။
သူတို့ ၂ ယောက်စလုံးက Federal စံနစ်ကို ဘာကြောင့် ထောက်ခံခဲ့ရတာတုံး ။
Federal စံနစ် နှင့် တည်ဆောက် မှသာလျှင် တရားမျှတပြီး ၊
ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲမယ့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ရနိုင်မယ်လို့ ၊
ဒီ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် နှစ်ယောက်လုံးက သိခဲ့ကြတာပါ ။
အဲတော့ ၊ သေသေချာချာလေးကို စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်ကွယ် ။
အဘ သဘောထား ကတော့ Federal စံနစ် စစ်စစ်ကြီးနှင့် ၊
တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ဆွဲဆောင် ( ချော့ခေါ် ) နိုင်ပြီး ၊
ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲမယ့် ပြည်ထောင်စုကြီးကို တည်ဆောက်ကြစေလိုတာပဲ ။
အမှန်တရား နှင့် တရားမျှတမှု အစစ်အမှန်ကို မြင်နိုင်ကြပါစေကွယ် ။
အမှန်တရား နှင့် တရားမျှတမှု အစစ်အမှန်ကို မြင်နိုင်တဲ့ ၊
ဥာဏ်ပညာ နှင့် သတ္တိ လည်း ရနိုင် / ရှိနိုင်ကြပါစေကွယ် ။
အဲလိုဆို ကျွန်တော်တို့ မောသျှမ်းတွေလဲ တစ်ကယ်တော့ တရုတ်ပြည်ကနေ ပြေးလာပြီး တိုင်းလုံဖြစ်လာရတာပါပဲ
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက သျှမ်းလူမျိုးအနေနဲ့ ဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူမိသလိုလိုပဲ.. တရားအားထုတ်မနေရတာကတစ်ကြောင်း.. လူမျိုးကြီးတစ်ရပ်အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်စာတွေနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်တာတစ်ကြောင်းပေါ့
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပြည်နယ်ကြီး တိုးတက်မှု နောက်ကျနေတာတော့ အားမရ ဖြစ်မိပြန်သဗျာ.. အထူးသဖြင့် သျှမ်းစာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ တိမ်မြုပ်လုဖြစ်နေတာကို ၀မ်းနည်းမိတယ်
ကိုယ်တိုင်တောင် သျှမ်းစာ မတောက်တစ်ခေါက်နဲ့.. အဲလို
အဘဖောကတော့ ဘယ်လိုရေးရေး တရုတ်တောထဲကကကိုး မထွက်ဖူး……
လူမျိုးကြီး ၀ါဒလို့ပြောရင်လည်း အဘကြိုက်မယ်မထင်…..
ကုလားပြည်နဲ့နီးလို့ကုလားစကား ပြောတယ်လို့ များ အဘထင်နေသလား…..
တိုင်းရင်းသားတိုင်းမှာ သူ့ စကားနဲ့သူ့ စကားရှိတယ်…….. ကုလားပြည်နဲ့နီးတိုင်း ကုလား စကား မပြောဖူး အဘ…….
နောက်တခုက တရုတ်ပြည်နဲ့ နီးလို့တရုတ်သွေးစပ်တာမဟုတ်ဖူး….. အဲ့ဒါတော့ အဘ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးမှာပေါ့… တရုတ်ပြည်မှာ မိန်းမရှားတဲ့ကိစ္စလေ…. ရှာပီးသာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့……
ပီးတော့ တရုတ်ပြည်နဲ့နီးလို့တရုတ်စကား ပြောတာ မဟုတ်ဖူးကွယ်….
တရုတ်ပြည်ထဲကနေ မြန်မာပြည်ထဲဝင် တိုင်းရင်းသားပါလို့ခံယူ ပီးတော့ တိုင်းရင်းသားစကားဆိုလို့နီးနီး စပ်စပ် သျှမ်းစကား ကရင်စကား တောင် သင်ဖို့မကြိုးစားပဲ နေနေတဲသူတွေကို အဘက ဘယ်ရှုထောင့်ကနေကြည့်ပီး တစက်မှအပြစ်မရှိပါဖူးလို့ပြောတာလဲ…..
အဘ ဗမာ နဲ့မြန်မာ တော့ ကွဲပါတယ်နော်……. ကွဲရင် တိုင်းရင်းသား ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ရှင်းပီးသားပဲ……
အဘပြောတဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ဘယ်တိုင်းရင်းသားကို ပြောတာလဲ… ၀လား…. တရုတ်လား…..
မြန်မာလူမျိုး စစ်စစ် ၊ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်မှာ သံသယဖြစ်စရာမလိုတဲ့ ၊
ကျွန်တော့် အဖေ ပြောသလိုပဲ ဗိုလ်ချုပ် လည်း စောစော သေလို့ ပဲ…. မသေရင် သူလည်း လူထဲကလူပဲ အမှား ရှိနိုင်တာပေါ့…… ဆိုလိုချင်တာက ရှိရှိသမျှ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေမှာ ရှေ့ ကနေ ထွက်ပြနေတဲ့သူတွေ ရှိသလို နောက်ကနေ လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်…. ကျွန်တော်လည်း နိုင်ငံရေး အကြောင်း ကို သိပ်တော့ စိတ်မ၀င်စားဖူး… ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ယောက်တည်း ရှိတယ်ဆိုတာကြီးတော့ နဲနဲ လွန်သလားလို့ ….. ဘာပြောပြော အနဲဆုံးတော့ အာဇာနည်ကုန်းမှာ သဂြိုလ်ထားတာ တယောက်တည်း မဟုတ်ဖူးလေ….
တစ်ခုပဲရှိတယ် နယ်စပ်ကနေ တရုတ်ပြည်ဘက်ကူးလို့ တရုတ်စကားမတတ်ရင် လူရာမဝင်ဘူး မြန်မာပြည်ဘက်မှာနေလို့ မြန်မာစကားမတတ်လဲ လူရာဝင်နေတယ်။ အဲဒါ အဲဒါ ဘယ်သူကတိုင်းရင်းသားတွေကိုအလျှော့ပေးထားတာလဲ ဘယ်နိုင်ငံက သူတို့အတွက်ပိုအခွင့်အရေးရစေတာလဲလို့ ။
စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာတော့အဲဒီ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ
ဘယ်လောက်အခွင့် အရေးရသလဲဆိုရင် ကိုယ်တွေ့ သိသလောက်
ပြေရရင်တောင်မှ အခန်းဆက်ရေးရမှာမို့ စောင့် ဖတ်ပြီးမှ
ပြောတော့ မယ် အဘရေ ……
လူမျိုးရေး ခဏဖယ်ပြီး လုံခြုံရေးရှုဒေါင့်အရ မြန်မာပြည်အတွက် အန္တာရာယ်ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု အားလုံး မြန်မာထက် တရုတ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့အပြင် လေးငါးသောင်းရှိနေတဲ့ သူတို့လက်နက်ကိုင်တပ်သည် အနာဂါတ် မြန်မာပြည်အတွက် ခေါင်းခဲစရာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ထဲ အစုအဝေးနဲ့ ရောက်လာ အခြေချတာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုရှိသွားပေမဲ့ ဗမာ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု အတော်နည်းတယ်။ စစ်တပ်ကပဲ တမင်လုပ်ထားသလား၊ သူတို့ကပဲ သီးခြားနေလိုသလား သေချာမသိပါ သို့သော် အဲဒီဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ကို ကူးလူးဆက်ဆံ နီးစပ်မှု သိပ်မရှိတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ခေါင်းငုံ့ဝင်လာတာ မဟုတ်လို့ တွေးလို့ရတယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာများ အခြေကျအသစ်ဝင်လာတဲ့လူမျိုး အုပ်စုတစုကို လက်နက်ကိုင်စစ်တပ် အင်အားအပြည့်နဲ့ လက်ခံထားဖူးသလဲ ပြောစမ်းပါဗျာ…။ ဒါနဲ့ စကားအတင်းစမ် ကိုမိုးသီးဘလော့မှာထင်တယ် ဝစစ်ရေးပြပွဲတခုမှာ ဝစစ်သမီးတပ်ဖွဲ့ ပစ္စတိုခါးချိတ်ပြီး စကပ်စစ်စိမ်းရောင် ယူနီဖောင်းနဲ့ ချီတက်အလေးပြုနေတာ မြင်ရသူကြောင်ကြီး အတော်စိတ်ကြွ(စစ်သွေးစစ်မာန်)လာစေတယ်။ ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ လုဝ ဝလု.. :razz:
အဲ့ဒါဘဲ ဂဘာပတ်ပီးချီးပါဘူးတာနဲ့ ဖင်ဂေါင်းအပီကျယ်တော့တာဘဲ
တိုင်းရင်းသားလူ့အခွင့်ရေးနဲ့ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် သြဇာလွှမ်းမိုးလိုမှု့စိတ်ဓာတ်တွေကို
(နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရ ( စာအုပ်ထဲပါတာပြောတာ ) တိုင်းရင်းသားတွေစုပေါင်းနေထိုင်တာကို
လက်မခံဘဲ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရေးဆွဲထားတဲ့
တိုင်းရင်းသားနယ်မြေ . မြေပုံတွေကို အပျင်းပြေလေ့လာကြည့်ဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်
ဥပမာ ကချင် ကယား ကရင် ချင်း မွန် ရခိုင် ရှမ်း စတဲ့
သူတို့ရေးဆွဲထားတဲ့ မြေပုံတွေထဲမှာ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု့ကိုသူတို့
ပြည်မကနေ ရယူမယ့် လွပ်လပ်ခွင့်လို ပေးမယ်လို့ ထင်နေကြသလား
ကက်ပတိန်ကြီး ကျိရဒါ သင်းဘောဘဲမောင်းတတ်ပြီး လှော်တက်ခုတ်တတ်ပုံမရဘူး
ကြုံလို့ပြောရရင် အခြေနေရ ဝနဲ့ ဘမာစစ်တပ်ချကြရင် ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ် သိပ်ယားမနေကြနဲ့
တိုင်းပျီမှာ စစ်သားနဲ့ ဘုန်းကြီးများနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘဲပြောနေကြတယ်မဟုတ်လား
ကချင်နဲ့ချထားတဲ့ ပိုက်လော့တွေ လက်တည့်ကုန်ပြီး
ခင်ဗျားတို့ပါပါ တရုပ်ဝင်ကူဘို့ဆိုတာ မမျှော်လင့်နဲ့ ခွေးမသားတရုပ်ကကြောင်သူတော်ကြွက်သူခိုး
ဖါရုံထောင်ပြီးချမ်းသာလာတဲ့ကောင်က ပိုက်ဆံရှိလာတော့ ဘုရားလူဂျီးဖြစ်ခြင်လာဘီ
အမေဒိဂန်လိုကောင်တွေ ဗမာဂိုချည်းကပ်လာလို့ ကချင်နဲ့ဝကိုမြှောက်ပေးမယ်လို့လုံးဝမထင်လိုက်နဲ့
ခုဏကပြောသလို အမေဒိဂန်နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီးသူလည်းဘုရားလူဂျီးလုပ်ခြင်လာဘီ
ဒါ့ကြောင့်အဖွားဂျီးရဲ့ ခရိုနီတွေကို ချည်းကပ်ပုံကို ဖင်ယားတဲ့ကောင်တွေလည်း ဖင်ခံစားကြ
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဒါတို့ပြေဒါဒို့မြေဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေဟာ
ခင်ဗျားတို့ ကလားတွေ တရုပ်တွေ ဗမာတွေ လီးလိုလိုမှိုလိုလိုကောင်တွေထက် ထက်သန်တယ်ဆိုတာ
အဖွားကြီးအာဏာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ( ဆိုရင်တောင် ) ချက်ခြင်းကြီးပြောင်းလဲလာဘို့သိပ်မမြှော်လင့်နဲ့
အဲ့ဒါက လက်ရှိအခြေနေမှာ ခရိုနီတွေကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျိန်းနေဟောင်နေကြတာကသက်သေဘဲ
( ကြုံလို့ဘီအီးလေးဘာလေးဒါနပြုလိုရင်တော့ ငှဲ့ညှာတဲ့နေနဲ့ လက္ခံပေးပါ့မယ် )
ဒါကတော့ ရွာထဲမဝင်တာကြာလို့ ပိုစ့်နဲ့ဆိုင်တာတွေရောမဆိုင်တာတွေရော
အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကို ပြည်မထဲကတိုင်းရင်းသားအခွင့်ရေးတွေဆိုတာ ပိုစ့်တစ်ခုမှာ
ကပု နင့်ဟာကလည်း လီး ချီး ဂျီး နဲ့ကမထွက်တော့ဘူး ခွီးထဲမှ ဟီး…
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားထဲမှာ လူဦးရေလည်းမများ၊သမိုင်းအစဉ်အလာအရလည်းမထင်ရှားခဲ့တဲ့ ၀ လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးစုဟာ(၈၈)မတိုင်ခင်မှာတော့တခြားသာမန်တောင်ပေါ်နေတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အတူတူပါ၊
Amphetamine လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးဝါးကိုအဓိကပို့ကုန်လိုသဘောထားပြီးအကြီးအကျယ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချရာက အချိန်တိုအတွင်းမှာအဆမတန်များပြားလာတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ စစ်အင်အားဖြည့် တင်းလာ ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။
မြို့တာချီလိတ်မြို့ပေါ်မှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်အလွန် USWA ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်း၊၀လက်နက်ကိုင်
အဲဒီကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ် မိုင်းဆတ်၊မိုင်းတုံ ပုံပါကျင်ဒေသဘက်ကိုလည်း
အဲဒီဒေသကိုသူတို့က တောင်ပိုင်းဝပြည်လို့ပြောပြီးစစ်အစိုးရဆီမှာနယ်မြေတောင်းဆိုနေတာပါ၊ မြောက်
ပိုင်းဝပြည်ကရဲ့မြို့တော်ကတော့တရုတ်နယ်စပ်မှာကပ်နေတဲ့ ပန်ဆန်းမြို့လို့ခေါ်ပြီးရှမ်းပြည် အရှေ့
မြောက်ဘက်အခြမ်းမှာရှိပါတယ်၊အနီးစပ်ဆုံးကတော့လားရှိုးကနေအရှေ့ဘက်တန့်ယန်းမြို့ကိုဖြတ် သံလွင်မြစ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းမက်မန်းမြို့နယ်နဲ့မိုင်းပေါက်ဒေသဟာသူတို့စိုးမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေပါဘဲ။ အဲဒါကိုအထူးဒေသ(၃)လို့ခေါ်ပါတယ်။
အထူးဒေသ(၃)နဲ့ကပ်ရက်တောင်ဘက်မှာနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတာကအထူးဒေသ(၄)လို့ခေါ်ပြီး မိုင်းလားမြို့အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်အုပ်စုရှိပါတယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ဘက်အစွန်ဆုံးမိုင်းယောင်းမြို့ နယ်ရဲ့တရုပ်ပြည်ဘက်ကပ်ရက်နယ်မြေတစ်ဝက်နီးပါးနဲ့ကျိုင်းတုံမိုင်းခတ်၊မိုင်းယန်းမြို့နယ် တွေရဲ့နယ်
မြေအချို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အထူးဒေသ(၄)ဟာ ၀ရဲ့အနီးစပ်ဆုံးစီးပွားအကျိုးတူမဟာ မိတ်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဂျပန်ကျ လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ကားတွေ မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းကိုဆန်တက်ပြီးအထူးဒေသ
စွပ်လွေကနေပန်ဆန်းအထိတောင်ပေါ်လမ်းမကြီးဟာအခုဆိုရင်တရုတ်နည်းပညာနဲ့ဖေါက်လုပ်ထားတဲ့ ချိုင့်ခွက်မရှိတဲ့ကတ်တရာအပြည့်ခင်းလမ်းကြောင်းဖြစ်သွားပါပြီ၊မြ၀တီလမ်းကြောင်းကနေဒီကားတွေဝင် တာလောက်ဘဲရန်ကုန်ကလူတွေသိတာ၊တကယ်တော့သူတို့နယ်မြေဖြတ်သန်းခယူပြီးမြန်မာပြည်ထဲ
” သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊စစ်ရေး၊ဒစ်ပလိုမေစီ၊တရားစီရင်ရေးတွေအများကြီးပြောချင်သေးတယ်။
ခုတော့စာတွေ အရမ်းရှည်သွားလို့နောက်မှပြောပါ့မယ်။ ”
ဆက်ပြောပါ ခမျ ၊ ဗဟုသုတ ရပါတယ် ။
” (၈၈) မတိုင်ခင်မှာတော့ တခြား သာမန်တောင်ပေါ်နေတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အတူတူပါ ”
ဝ တပ်တွေဟာ ၊ အစိုးရတပ် အဆက်ဆက် သိမ်းလို့ မရခဲ့တဲ့ ၊
ခွန်ဆာရဲ့ MTA ဋ္ဌာနချုပ်ကို လိုဏ်ခေါင်တွေတူးပြီး အသေခံ ဝင်သိမ်းခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီ စစ်ဆင်ရေးကို အနီးကပ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အစိုးရတပ် အရာရှိကြီးတွေကအစ ၊
ဝ တပ်တွေ ရဲ့ စစ်ရေး ကျွမ်းကျင် ရဲရင့်မှုကို လက်ဖျားခါခဲ့ရပါတယ် ။
ပြီးတော့ ဝ တပ်တွေဟာ Gunnery မှာ တော်တော် ကောင်းတယ်ပြောပါတယ် ။
အဲဒီတော့ ဝ တွေဟာ ၊ သာမန် အဆင့်ထက်တော့ သာမယ် ယူဆပါတယ် ။
” အဲဒီဒေသကိုသူတို့က တောင်ပိုင်းဝပြည်လို့ပြောပြီးစစ်အစိုးရဆီမှာနယ်မြေတောင်းဆိုနေတာပါ ”
အဘ သိသလောက် သူတို့ ” တောင်ပိုင်းဝပြည် ” ကို ရထားပြီးပြီလေ ။
သမဒဂျီး FR လည်း မကြာခင် ထမင်းလွတ် ဟင်းလွတ်ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်
တိုင်းရင်းသားတွေ နယ်မြေတိုင်းရင်းသားတွေသာ ပိုင်တယ်ဆိုတာတော့ မှန်ပါတယ်ခင်ဗျ။
သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်တွေ ဘာတွေကျဆုံးပြီးနောက် ကုလသမဂတို့ဘာတို့ ပေါ်ပြီးနောက် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှူ့ အရတော့ ဒီနယ်မြေတွေက မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတာထဲမှာ ပါထားပြီးသားဖြစ်နေပြန်ရော။
အတ္တကြီးကြီးနဲ့ စဉ်းစားပြန်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီနယ်မြေတွေ တရုတ်ထဲပါသွားမှာကြ တော့ လက်မခံနိုင်ကြပြန်ဘူး။ မျက်ကန်းမျိုးချစ်လို့ဘဲ ပြောပြောပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးမပေးချင်လို့ နှိမ်ချင်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာတော့ အဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်ဘက်ပါအောင် မဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ မြန်မာအစိုးရညံမှူ့  အမြော်အမြင်မရှိမှူ့  အတ္တကြီးမှူ့တွေကြောင့် ပါဘဲ။
တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ကြည့်တော့လည်း နယ်စပ်မျဉ်းဟိုဘက်က တရုတ်နိုင်ငံထဲက မြို့လေးတွေဟာ နတ်ဘုံနတ်နန်းလို့ မြင်မိကြမှာဘဲ၊ အဲ့တော့ သူတို့နဲ့ သွားပေါင်းချင်သူတွေလည်းများမှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အဲ့ လို့ ခွဲထွက်လိုက်တိုင်း၊ တရုတ်ပြည်နဲ့ သွားပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတိုင်း ပြဿနာတွေက ဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ မမြင်မိပြန်ဘူးခင်ဗျ။ ဥပမာ တိဘက်တွေ တရုတ်ပြည်ကနေ ခွဲထွက်ချင်နေကြသလိုမျိုးပေါ့။
နောက်တစ်ချက်က အဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆရာတွေဘဲ။ တရုတ်နဲ့ ပေါင်းလိုက်ပြီးရင်ကော အဆိုပါဆရာတွေက လက်နက်ဆက်ကိုင်ကြမှာလား၊ တရုတ်ပြည်ထဲက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဘာတွေ လာလုပ်ရင် သူတို့လက်ခံပေးကြမှာလား။ နောက်သူတို့ တိုက်နေတယ်ဆိုတာ ဒေသခံပြည်သူတွေ အတွက်လား၊ သူတို့တွေ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက်လား။
ပြီးတော့ ကျွန်တော့်တို့ရဲ့  ရှေ့ နောက်အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်ရော၊ကုလားကပါ လူမျိုးခွဲခြားရေးစိတ်ကြီးပါတယ်။ သူတို့ တရုတ်လူမျိုးစစ်စစ် ခြင်းတောင် စင်ကာပူကလို ချမ်းသာနေတဲ့ တရုတ်မျိုးကို ပြည်မကြီးက တရုတ်က နှိမ်ချင်တယ်။ အခုနေ တိုင်းရင်းသားတွေတရုတ်လက်အောက် ရောက်သွားရင်လည်း တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ ဆိုတာ သိပ်တော့မလွယ်လှဘူးထင်တယ်။
နောက်ဖက်ဒရယ်လိုချင်လို့ ဆိုပြီးတောင်းနေကြတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ ခက်တာက အဲ့ ဖက်ဒရယ်ရသွားရင် ဘာတွေအကျိုးရှိမှာလည်း ဆိုတာ အမှန်တိုင်းပြောရင် ကျွန်တော်လည်း သေချာမသိဘူးခင်ဗျ။
ပြည်မ ဘက်က ဗမာတွေအမြင်ကြတော့ ပြည်ထောင်စုကြီးကနေ ခွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာ။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသူကြီးတွေကလည်း ဖက်ဒရယ်ရမှ ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ဆိုတော့။ တိုင်းရင်းသားအများစုကလည်း ဖက်ဒရယ်ရဲ့  တကယ့် အကျိုးအပြစ်ကို သေချာမသိဘဲ တောင်းနေကြသူတွေ များမယ်ထင်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရင် ကျွန်တော်တို့ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ ဘုရားရှစ်ခိုးသလိုမျိုး နှစ်ဘက်စလုံးက ဖြစ်နေကြတယ်ထင်ပါတယ်။
အဲ့တော့ ဖက်ဒရယ်ရဲ့  တကယ့် အနှစ်သာရကို လူတွေသဘောပေါက်နားလည်လာအောင် လုပ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ညိုယူသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ လက်နက်ကိုင်နေကြတာ ရုပ်ဆိုးလွန်းလှပါတယ်။
” ခက်တာက အဲ့ ဖက်ဒရယ်ရသွားရင် ဘာတွေအကျိုးရှိမှာလည်း ဆိုတာ
အမှန်တိုင်းပြောရင် ကျွန်တော်လည်း သေချာမသိဘူးခင်ဗျ။ ”
ကို pazflor ရဲ့ ။
အဘ တောက်လျှောက် Federal မူ စစ်စစ်ကို ထောက်ခံခဲ့ပါတယ် ။
အဲလို Federal မူ စစ်စစ်ကို ထောက်ခံခဲ့တာ ဟာ ၊
ပြည်ထောင်စုကြီးကို မပြိုကွဲစေချင်လွန်းလို့ပါ ။
ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲစေဖို့ အတွက်က ၊
Federal စံနစ် သာလျှင် တစ်ခုတည်းသော ( တစ်ခုတည်းသော ) အဖြေဖြစ်ပါတယ် ။
Federal စံနစ် မပေးမှသာလျှင် တိုင်းရင်းသားတွေက မကျေမနပ် နှင့် စစ်ဖြစ်ပြီး ၊
ပြည်ထောင်စုကြီးကနေ ခွဲထွက်သွားကြမှာဗျ ။
တိုင်းရင်းသား တန်းတူ အခွင့်အရေး – သုရှင်
Posted by သုရှင် on Jan 9, 2013 in Editor’s Choice, Ethnic Groups, Opinion – Op-ed | 68 comments
မြန်မာပြည်ထောင်စုကြီးမှာ.. ဗမာလည်း.. တိုင်းရင်းသားတမျိုးပဲဖြစ်ပါကြောင်း..
“ဝ” ရော၊ “လု” ရော တစ်မြေထဲနေ၊ တစ်ရေထဲသောက် တိုင်းရင်းသားပါ အဘဖောရေ။
(ဝ = I ၊ လု = You ) :hee:
ဒါထက် ကျွန်မတို့ ကို ဆွစ်ဇာလန် မှာ မထားခဲ့ပါနဲ့ဦး။
ဝ ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးထားတယ်လေ
သူတို့က ထပ် ခွဲထွက်ချင်ရင်တော့
ဝ ကို ဦးမာဃတို့ကတော့ တိုင်းရင်းသားလို့ ယူဆထားဆဲပါ
” သူတို့က ထပ် ခွဲထွက်ချင်ရင်တော့ ”
ဦးမာဃ ရဲ့ ။
သူတို့က ခွဲထွက်ချင်တယ်လို့တော့ မပြောပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဗမာ စစ်တပ်ကို မယုံသေးတော့ ၊
သူတို့ လက်နက် ဆက်ကိုင်ထားမယ့် သဘောတော့ ရှိတယ် ။
The Keystone Pipeline System isapipeline system to transport synthetic crude oil and diluted bitumen (“dilbit”) from the Athabasca oil sands region in northeastern Alberta, Canada to multiple destinations in the United States, which include refineries in Illinois, the Cushing oil distribution hub in Oklahoma, and proposed connections to refineries along the Gulf Coast of Texas.
အဲဒီကီးစတုန်းပိုက်လိုင်း.. ကနေဒါကနေ… အမေရိကားရဲ့ပြည်နယ်တွေတော်တော်များများဖြတ်သွယ်တာကို.. အိုဘားမားအစိုးရကိုင်တွယ်ပုံ.. မြန်မာအစိုးရသေသေချာချာလေ့လာသင့်တယ်..
ဖယ်ဒရယ်ရယ်..။ ပြည်နယ်အစိုးရတွေရယ်.. လူထုရယ်.. အကျိုးအမြတ်ရယ်..ကစားတဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါ…
ွှအဲလိုပြောလို့.. ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းပါတယ်ဆိုပြီး.. “ထ” မလာကြနဲ့ဦးနော..
အမေရိကားမှာ..အဲလိုပိုက်လိုင်းတွေ ကွန်ယက်တွေလို.. ရာချီရှိတယ်..
U.S. News & World Report (blog)-3 minutes ago
Gov. Dave Heineman’s approval this week of the Keystone XL pipeline reroute through Nebraska rocketed one of America’s most important …
New York Times-Jan 22, 2013
WASHINGTON — The governor of Nebraska on Tuesday approvedarevised route through the state for the Keystone XL pipeline, setting upa…
Freshman Dem senators quickly join Keystone pipeline push
The Hill (blog)-Jan 23, 2013
Two freshman Senate Democrats have jumped into the fight over the Keystone XL oil pipeline, joining seven other Democrats and dozens of …
State Department’s Keystone Pipeline Decision Delayed Until After …
Huffington Post-Jan 22, 2013
Nuland’s comments came shortly after Nebraska’s governor approvedarevised route in his state for the Keystone XL pipeline that would link …
တစ်ယောက်ချင်းတော့ ပြန် မဖြေရှင်းတော့ဘူး ။
အားလုံးကိုပဲ ခြုံပြီး ပြန် ရှင်းလိုက်တယ် ။
အဘ သိရသလောက် ၊ ဖတ်ရသလောက် ၊
“ဝ” လူမျိုးတွေက မြန်မာပြည်ထဲကို ၊
အခုမှ ရောက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဟိုးရှေးခေတ် ကတည်းက ရှိခဲ့တာပါ ။
ဟိုးရှေးခေတ် ကတည်းက ရှိခဲ့တာဆိုတာ ၊ မှန်ရင်တော့ ၊
သူ့ကိုလည်း Native တိုင်းရင်းသားလို့ပဲ ခေါ်ရမှာပဲလေ ။
ကူမင်တန်တပ်တွေ မြန်မာပြည်ထဲကို ရောက်လာတုန်းက ၊
မြန်မာပြည်ထဲမှာ ကူမင်တန် တရုတ် အချို့ ကျန်ခဲ့ကြတယ် ။
အဲဒီ ကူမင်တန် တရုတ်တွေနှင့် “ဝ” လူမျိုးတွေ ၊
သွေးနှောသွားတာတွေတော့ ရှိပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ နေရင်း ဒေသခံ ဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသားလို့ပဲ ခေါ်ရမှာပဲလေ ။
“ဝ” မှာ စကား ပဲရှိပြီး ၊ စာ ( အက္ခရာ ) မရှိတဲ့အတွက် ၊
စာ ( အက္ခရာ ) အနေနှင့် တရုတ် စာ ( အက္ခရာ ) ကို ထည့်ထားရတယ် ပြောတယ် ။
ကချင် ကတော့ စာ ( အက္ခရာ ) အနေနှင့် အင်္ဂလိပ် စာ ( အက္ခရာ ) ကို ထည့်ထားတယ် ။
“ဝ” သူပုန်တွေက မြန်မာအစိုးရကို ပုန်ကန်နေတာလည်း ကြာလှပါပြီလေ ။
ဗကပ တွေ မရောက်လာခင် ကတည်းက လို့ပြောကြတယ် ။
ဗကပ တွေ ရောက်လာတော့ ၊ ဝ တွေက ဗကပ အောက်ဝင်ခဲ့ကြတယ် ။
၈၈ အရေးအခင်းပြီးတော့မှသာ ဝ တွေက ဗကပ အောက်ကနေပြန်ခွဲထွက်ခဲ့ကြတယ် ။
လက်ရှိတော့ ဝ တွေက တရုတ်စကားကို ရုံးသုံး လုပ်ထားတယ် ။
တရုတ်ငွေကိုပဲ သုံးတယ် ၊ ဝ ရုပ်သံ ကလည်း တရုတ်လိုပဲ လွှင့်တယ် ။
ဝ တွေကလည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တောင်းနေတယ် ။
အဓိက ပြဿနာက ၊ ဝ တွေက ဟိုးရှေး ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် ကတည်းက ၊
မြန်မာပြည်ထဲမှာ နေခဲ့တာ ဟုတ်မဟုတ် ကိုပဲ ငြင်းရမှာပါ ။
ဟိုးရှေး ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် ကတည်းက နေခဲ့တာ ဟုတ်နေရင်တော့ ၊
ဒါကို ၊ Native တိုင်းရင်းသားလို့ ယူဆရမှာပါပဲ ။
သူ့ဘာသာသူ တရုတ် စကားပဲ ပြောပြော ၊ ဂျပန် စကားပဲ ပြောပြော ပါ ။
ဝ တွေက ဘာကိစ္စနှင့်မှ ရှမ်းစကား ၊ ဗမာစကား ပြောင်းပြော ၊ ပြောင်းသင်စရာ မလိုပါဘူး ။
ဒါ ၊ လူမျိုးရေး ဖိနှိပ် ဝါးမျို ဖျောက်ဖျက် ရေး အယူအဆကြီးပါ ။
သူ့လူမျိုး သူ့ဘာသာ သူ့စကား သူ့ယဉ်ကျေးမှုကို ၊ သူတို့ ထိမ်းသိမ်း သင့်ပါတယ် ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ ရှမ်း ၊ မွန် ၊ ကချင် တွေတောင် ဝ ကို အတုယူသင့်ပါတယ် ။
အခုဆိုရင် ရုံးသုံး ၊ ကျောင်းသုံး မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၊
ရှမ်း ၊ မွန် ၊ ကချင် ဘာသာတွေ တဖြေးဖြေး ပျောက်လာပါပြီ ။
အမှန်ကတော့ ၊ စကားမရှိ စကားရှာပြီးသာ ငြင်းနေရတာပါ ၊
ဝ တွေကို တိုင်းရင်းသားအနေနှင့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က အသိအမှတ်ပြုပြီးသားပါ ။
အခု အနောက်ပိုင်းက ဘင်္ဂါလီ ပြဿနာ မှာလည်း ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ ။
ဘင်္ဂါလီ တွေက ဟိုးရှေး ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် ကတည်းက နေခဲ့တာလို့ ပြောနေကြတာပါပဲ ။
ကြုံလို့ ပြောပြရဦးမယ် ၊
အဘ က တရုတ် တစ်ဖက်ထဲက ပြောနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စတုန်းကလည်း ၊
ဟိုးရှေး ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် ကတည်းက နေခဲ့တာ မှန်ရင် ။
ဘင်္ဂါလီ တွေကို နိုင်ငံသား ပေးသင့်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ် ။
တိုင်းရင်းသား အရေးကိစ္စတွေမှာလည်း ၊
တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးသင့်တယ်လို့ အမြဲ ပြောနေတာပါ ။
ဟဲ ဟဲ ၊ အဘ လည်း ကိုယ် ယုံကြည်ရာ ၊
ကိုယ် တရားမျှတတယ်လို့ မြင်တဲ့အတိုင်း ရေးမိတာမို့လို့ ၊
ဗမာ ကြိုက် မဟုတ်ရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါကွယ် ။ ဟီ ဟိ ။
ရေးပါ အဘဖော ရေ။
မသိတာတွေလည်း ဗဟုသုတအဖြစ် သိရသလို
ဘာသာစကား ထိန်းသိမ်းတာနဲ့ အများစုရုံးစကား သင်ကြားတာ ကွဲပြားဖို့လိုတယ်။ အလက်စ်ကာ ပြည်နယ်ကို ၁၉ရာစုမှာ ရုရှားတွေဆီက အမေရိကန် ဝယ်လိုက်တော့ ဒေသခံ ရုရှားဘာသာစကား ပြောသူတွေကို အင်္ဂလိပ်စကားပြော ပုံစံသွင်းခဲ့တဲ့ သမိုင်းရှိတယ်။ ဩစတေးလျမှာလည်း ဒေသခံ အဘိုဂျင်းနီးတွေကို လုပ်ခဲ့တာ အလားတူပုံစံ ရှိပါမယ်၊ မြန်မာပြည်လို ဗြောင်ကျမယ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ.. သို့သော် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ အာဏာသက်ရောက်ဖို့၊ စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ စတဲ့နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး အမြင်တွေအရ ဘာသာစကား မကွဲပြားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ပြည်နယ်သားခြင်းအတူတူ မြို့ပေါ်မှာ မြန်မာစကားပြောတတ်ပြီး တောင်ပေါ်မှာ မပြောတတ်တာ ကူးလူးဆက်ဆံမှုနည်းလို့၊ ဘာလို့နည်းလဲ အခွင့်အလမ်း မရှိလို့..။ ဒီတော့ မြန်မာစကား မပြောတတ်သေးသူတွေကို အထူးသဖြင့် မျိုးဆက်သစ်ခလေးများကို ကျောင်းစာပေ သင်ကြားမှုနဲ့အတူ အသုံးချဖို့ တန်းတူအခွင့်အလမ်း မက်လုံးတွေ ဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်။
တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုကို
တရုတ်နိုင်ငံက ခေတ်မှီ လက်နက်တွေကို ရောင်းချနေတယ်လို့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ
လေ့လာသုံးသပ်သူတွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အင်အားအကြီးဆုံး
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော်ကို တရုတ်က
လက်နက်တွေ တိတ်တဆိတ် ရောင်းချနေတာဖြစ်တယ်လို့ ကာကွယ်ရေးနဲ့
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Jane Defense အဖွဲ့က
ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို သတင်းထောက် Daniel Schearf
ဘန်ကောက်က ပေးပို့တဲ့သတင်းအပေါ်မူတည်ပြီး မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပါမယ်။
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်လက်နက်ကိုင် KIA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့
တရုတ်အစိုးရ ပြောနေချိန်မှာပဲ တရုတ်အစိုးရဟာ နယ်စပ်က
နောက်ထပ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ The United Wa State Army (UWSA) ဝတပ်ဖွဲ့ကို လက်နက်တွေ တိတ်တဆိတ်ရောင်းချနေတယ်လို့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လေ့လာသူတွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ စစ်တပ်အင်အားကို ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့
ခေတ်မှီလက်နက်တွေကို တရုတ်က ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ရောင်းချခဲ့တယ်လို့
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လေ့လာရေး Jane အဖွဲ့ရဲ့ ဒီဇင်လာဘာလက ထုတ်ပြန်တဲ့
ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ရောင်းချခဲ့တဲ့အထဲမှာ မြေပြင်ကနေ ဝေဟင်ပစ် Missile ဒုံးလက်နက်တွေ ပါဝင်သလို သံချပ်ကာကား ၁၂ စင်း အနည်းဆုံး ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ Jane ထောက်လှမ်းရေး
အစီရင်ခံစာ အဆိုအရတော့ Tank Destroyer တင့်ကားဖျက်လက်နက်တွေလို့
သုံးနှုန်းထားပါတယ်၊ ဒီအစီရင်ခံစာကိုရေးသားတဲ့ ထိုင်းအခြေစိုက်
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်သူ Anthony Davis က တရုတ်အစိုးရဟာ
ဝတပ်ဖွဲ့ကို လက်နက်တွေရောင်းနေပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို
အတိမ်းအစောင်းမရှိအောင် ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊
“တရုတ်ဟာ နယ်စပ်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်
တပ်ဖွဲ့တွေကို လှစ်လျှူရှုထားမထားနိုင်သလို ဗဟိုအစိုးရကိုလဲ လစ်လျှူ
မရှုထားနိုင်ပါဘူး၊ ဒါဆိုရင် တရုတ်က လက်နက်ကိရိယာတွေကို
တိုက်ရိုက်ပေးနေသလားလို့ ဆိုရင်လဲ အဲလို မဟုတ်ပြန်ပါဘူး၊ လက်နက်တွေဟာ
အစိုးရအဖွဲ့ထဲက အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူတွေဆီက လာတယ်ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်၊
အဲဒီလိုပြောလို့ တိုက်ရိုက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတယ်လို့လဲ မဆိုနိုင်ပါဘူး၊
သူတို့အတွက်က ငြင်းသာ ဖယ်သာ အခြေအနေကိုထိန်းထားဖို့ လိုပါတယ်”
Jane အဖွဲ့ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးသုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာနဲ့ ပါတ်သက်လို့
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက တစုံတရာ တုံ့ပြန်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်၊
သမ္မတပြောခွင့်ရသူ ပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကလဲ ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့
ပါတ်သက်လို့ တုံ့ပြန်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်၊
“ဒီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာသတင်းအချက်အလက်မှ မရပါဘူး၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးမှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့
တရုတ်အစိုးရက အမြဲအာမခံချက် ပေးပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ အာမခံချက်ကို
မြန်မာအစိုးရကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲမှာ ဝ တပ်ဖွဲ့ဟာ အင်အားအများဆုံးဖြစ်ပြီး
စစ်သားအင်အား ၃ သောင်းလောက် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်၊ တရုတ်အစိုးရက
ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ရေးမူကို မူအားဖြင့် ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ ဝတပ်ဖွဲ့ကို
လက်နက်တွေ အကြီးအကျယ် ထောက်ပံ့နေခဲ့တာ ကြာပြီလို့ စစ်ရေးသုံးသပ်သူတွေက
UWSA ဝအဖွဲ့ဟာ 1989 ခုနှစ်က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနေ ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့
လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲက တခုဖြစ်ပါတယ်၊
တရုတ်အစိုးရက ကွန်မြူနစ်တွေကို တိုက်ရိုက်ထောက်ခံလာခဲ့သလို
ခွဲထွက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ သူပုန်အဖွဲ့တွေနဲ့လဲ ဆက်ဆံရေး မပျက်ခဲ့ပါဘူး၊
အဲဒီအထဲမှာ တရုတ်အစိုးရဟာ တရုတ်ဘာသာစကားပြောတဲ့ ဝ အဖွဲ့နဲ့
ပိုပြီးရင်းနှီးတယ်လို့ Yale တက္ကသိုလ်မှာ ပါရဂူဘွဲ့ဆည်းပူးနေတဲ့ Josh
Gordon ကမြင်ပါတယ်၊ ဝ တွေဟာ တရုတ်တွေရဲ့ ကိုယ်ပွားဖြစ်တယ်လို့ သူက
“သူတို့ဟာ တရုတ်ယွမ်ငွေကို သုံးတယ်၊ တရုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကို သုံးတယ်၊
မြို့ထဲက နေရာတော်တော်များများမှာ တရုတ်ဆီက လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ကို
သုံးတယ်၊ တရုတ်ရဲ့ အင်တာနက်ကို သုံးစွဲ ဆက်သွယ်နေကြပါတယ်။”
အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းက UWSA ဝအဖွဲ့နဲ့ 1990 ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ
အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး သဘောတူခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ
အထူးဒေသတွေပေးပြီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဝဒေသဟာ
အာရှမှာ Methamphetamine စိတ်ကြွဆေးတွေ အများဆုံးထွက်ရှိရာ ဒေသဖြစ်လာသလို
ဝအဖွဲ့ဟာ ဒေသတွင်းမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး မူးယစ်ဆေးရောင်းချတဲ့ အဖွဲ့အဖြစ်
လက်ခံကြထားကြပါတယ်၊ ဝခေါင်းဆောင် ဝေလျှောက်ခန်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို
အလိုအရှိဆုံး မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် အမေရိကန် မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ DEA က
၂၀၁၁ ခုနှစ်က ထိုင်းပျော်ပွဲစားရုံတွေမှာ ချိတ်ဆွဲ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရက ဝတပ်ဖွဲ့ကို လက်နက်တွေရောင်းနေပေမဲ့ တရုတ်
မြန်မာနယ်စပ်ဒေသကို တည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြားအောင် လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးလို့
Davis ကပြောပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကတော့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ခိုက်သလိုမျိုး ဝ ဒေသကို တိုက်ခိုက်ဖို့
စိတ်တောင်မကူးနဲ့ဆိုတာမျိုး အချက်ပေးချင်တာသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊
“မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်တွေက လှုံ့ဆော်
သွေးထိုးပေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဝကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးခြင်းအားဖြင့်
သူတို့အနေနဲ့ စစ်ရေးအတားအဆီးကို အားပေးနေတာပါ၊ တရုတ်နိုင်ငံအကျိုးအတွက်
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ထဲကရှိခဲ့တဲ့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုကို သူတို့က
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေး ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ တရုတ်က အဆင့်မြင့်စစ်အရာရှိကြီးတယောက်ကို ဒီလထဲမှာပဲ တရုတ်က စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရလက်ထက် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့
ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ခံထားရချိန်ကာလကဆိုရင် တရုတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ
အတော်ကို သြဇာညောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်
အနောက်နိုင်ငံတွေက ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာအပေါ် တရုတ်ရဲ့ သြဇာ
လွှမ်းမိုးမှုဟာ လျှော့ပါးလာခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် တရုတ်က ဝ တပ်ဖွဲ့ကို
လက်နက်တွေရောက်ပြီး တုံ့ပြန်လိုက်တာလို့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ
လေ့လာသုံးသပ်သူ Anthony Davis က သုံးသပ်ပါတယ်
အမှန်က ဝ တွေက လက်နက်ပွဲစားလည်းလုပ်တယ် ။
သူတို့ လက်နက်စက်ရုံက ထုတ်တဲ့ AK 47 တွေရော ၊
တရုတ်ကြီးဆီက ဝယ်လို့ရတဲ့ လက်နက်တွေကော ၊
တခြား သူပုန် အဖွဲ့တွေကို ပြန်ရောင်းတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဝ တွေကသိပ်မဆိုးဘူး ၊ စည်းရှိတယ်လို့ ပြောရမယ် ။
သူတို့ တရုတ်ကြီးဆီက ဝယ်ထားတဲ့ ၊
Man-portable air-defense systems ( MANPADS )
လေယာဉ်ပစ် ဒုံးပျံတွေကို ကချင်ကို ပြန် မ ရောင်းဘူး ။
ဒါကြောင့် ဗမာ အစိုးရက ဝ တွေကို သိပ်ချစ်နေတာ ။
အဲဒီ လေယာဉ်ပစ် ဒုံးပျံတွေ KIA ဆီရောက်သွားလို့ကတော့ ၊
MI – 35 တွေတော့ နားကားပြီပဲ ။
ခုလည်းကမ္ဘာ့ လက်နက်ထိမ်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးက ခိုင်မာတဲ့
ရခိုင်ထဲက ကလားတွေဆီမှာ နျူကလီးယားတွေရှိနေကြဘီဒဲ့
အိန္ဒိယကနေရတယ်လို့အစီရင်ခံစာက ရမ်းချ ဟုတ်ပါဘူး
သူတို့တွေဟာ အဆိုပါ နျူကလီးယားတွေကို
ဝပြည်နယ်ထွက် လဖက် အဖန်ခြောက်ကောင်း၂တစ်ထုပ် လက်ဆောင်ပေးပါရစေ
အခုနောက်ဆုံး အခြေအနေက ၊
တရုတ်က အရာရှိကြီး တစ်ယောက် လာသွားတယ် ကြားတယ် ။
အခု အမေရိကန်နှင့် အစိုးရ နှင့် နဲနဲ တင်းမာနေပြန်ပြီ ။
တရုတ်ကြီး နှင့် အမေရိကန် က နူကလီးယား ပိုင်ရှင်တွေ ။
သူတို့ အချင်းချင်း ဘယ်တော့မှ ထိပ်တိုက် အတွေ့ခံမှာ မဟုတ်ဘူး ။
သူတို့က သူတို့ ရဲ့ လက်နက်တွေကို မြန်မာ့မြေမှာ စမ်းကြလိမ့်မယ် ။
သေတဲ့ အခါကျတော့ ၊ ဝ တွေ ၊ ကချင်တွေ ၊ ဗမာတွေပဲ သေကြရမှာ ။
ဂျော်ဂျီယာ ( South Ossetia ) ကိစ္စမှာတုန်းက ၊
ရုရှားတွေလဲ တကယ် ဝင်လာရော ၊
အမေရိကန် ကသူ့တပည့် ဂျော်ဂျီယာ ကို သစ္စာဖေါက်ပြီး ၊
အရူးကွက်နင်းပြီး ၊ ရှောင်ထွက်သွားခဲ့တယ် ။
နောက်ဆုံး South Ossetia ကို လွတ်လပ်ရေးပေးလိုက်ရတယ် ။
အဲဒီတော့ အမေရိကန်ကို ယုံပြီး ပုံအပ်လိုက်လို့တော့ မဖြစ်ဘူး ။
တကယ် တရုတ်ကြီး သာ ဝင်လာရင် ၊
အမေရိကန် အရူးကွက်နင်းပြီး ရှောင်ထွက်သွားမှာ သေချာတယ် ။
တရုတ်ကြီး နှင့် အဆင်ပြေအောင် ၊ နေ ကို နေရမယ် ။
ရွေးစရာ လမ်းမရှိဘူး ၊ အဆင်ပြေအောင် ၊ နေ ကို နေရမယ် ။
အတော်လေးကို စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ နိုင်ဂံအရေးအရာတွေပါလား………….
ကိုယ့်ဖာသာ လောင်းဂစားလေးလုပ် ဘီယာလေးသောက် ဟိုဆော်လေးနဲ့စမြူ
ဒီဆော်လေးနဲ့စမြူ ဟိုဒေသသွားနေလိုက် ဒီဒေသသွားနေလိုက် အေးရာအေးကြောင်းလေးပဲ
၁၉၆၀ ခုနှစ် အများပြည်သူ က တခဲနဲ ရွေးချယ် ထား သော ဦးနု အစိုးရ က ကွန်မြူနစ်တရုတ်ပြည်ကြီး နှင့် နယ် နမိတ် စာ ချုပ် ရေး ဆွဲ တဲ့ အ ချိန် ၊
( ဗမာ ပြည် ၏ ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင် က ဗိုလ် ရှုမောင် ခေါ် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ၊ အဖွဲ့ဝင် တွေ က တော့ ရှမ်း ပြည် မှ စော်ပွား ကြီး များ နှင့် ကချင် ပြည် နယ် မှ ဒူဝါ ကြီး များ ပါ ဝင် ခဲ့ တယ် )
ကွန်မြူနစ်တရုတ်ပြည်ကြီး ( ဟို တလော က ဘထွေး လို လို ၊ ဘာလိုလို တော် ခဲ့ သေး ပ )က ၊
ကချင် ပြည် ၏ ချီပွေလောခေါင် နယ်မြေ ၊
ရှမ်းပြည် ရဲ့ “ ဝ ” နယ်မြေ နှင့် နမ်းခမ်း နယ်မြေ များ ၊
စုစုပေါင်း စတုရန်း မိုင် ပေါင်း ၈ သောင်း ကျော် ကို ဦးနု ၏ ဗမာ အစိုးရ အား လက် ဆောင် အ ဖြစ် ဆက်သ လိုက် ပါ တယ် ။
ဒါ ကြောင့် တိုင်းရင်းသား ကချင် လူမျိုး တွေ ကချင် နံမည် မှည့် ပြီး ကချင် စာ ဖတ် ၊ ကချင် စကား ပြော ခွင့် ရှိ ရင် ၊
တိုင်းရင်းသား “ ဝ ” တို့ လည်း တရုတ် နံမည် မှည့် ပြီး တရုတ် စာဖတ် ၊ တရုတ် စကား ပြော ခွင့် ရှိ သည် ။
နယ်မြေ ဘဲ ယူ မယ် ကွ ၊ လူ ကို တော့ မ ယူ ဘူး ဟေ့ ဆို ရင် တော့ တမျိုး ပေါ့ ဗျာ ။
မထင်နဲ့ ၊ လုပ် တတ် တယ် နော် ~~~~~~
ကချင်နယ်တခုကို.. ဦးအောင်ကြီး ချိုင်းနားကိုပေးဖူးတယ်မှတ်မိတယ်..
တိုင်းရင်းသားဝအကြောင်းကိုတော့.. (ဦး)သိန်းဖေမြင့်စာအုပ်တအုပ်မှာ.. တိုင်းရင်းသားဝတွေကအညာသားရုပ်နဲ့တူတယ်.. အသားလည်းမဲတယ်လို့… ရေးဖူးတယ်မှတ်မိတယ်..
သဂျီး မင်း ခင်ဗျား ~~~
ကျနော့ မျိုး ကို “ ဆရာကြီး ” လို့ မ ခေါ် ပါ နဲ့ ၊ အဓိပ္ပာယ် လေးနက် လွန်း လို့ပါ ။
အဲ ဒီ ထဲ က မြေ ပုံ ကို နဲနဲ ကြည့် လိုက် ၊
ကျနော် ငယ်ငယ် တုံး က ဖတ် ဖူး တဲ့ မြေ ပုံ လည်း အဲ ဒီ အတိုင်း ဘဲ လို့  အောက် မေ့ တယ် ။
” စုစုပေါင်း စတုရန်း မိုင် ပေါင်း ၈ သောင်း ကျော် ကို
ဦးနု ၏ ဗမာ အစိုးရ အား လက် ဆောင် အ ဖြစ် ဆက်သ လိုက် ပါ တယ် ”
ကို Don Juan Ronald ရေ ။
ထူးခြားတဲ့ အသိလေးကို ဝေမျှတဲ့အတွက် ၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ၊ ပထမဦးဆုံး ပြောပါရစေ ။
ဒါပေမယ့် ကို Don Juan Ronald ရဲ့ Link လေးကို ဖတ်ကြည့်တော့ ၊
မြေပုံလေးတွေ က အဓိပ္ပါယ်ကို ရေးရေး ဖေါ်ပြနေပေမယ့် ၊
စာတွေကတော့ တရုတ်စာတွေ ဖြစ်နေလို့ ၊ မဖတ်တတ်ပါဘူးဗျာ ။
ကို Don Juan Ronald များ နဲနဲလောက် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်မလားဗျာ ။
ဒါမှမဟုတ် ၊ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ Post များ မရှိဘူးလားဗျာ ။
ကျနော်လည်း ဒီ Post လေးရေးပြီးတဲ့ အခါ ၊
သမိုင်းကြောင်းတွေကို တော်တော် လေးဖတ်ဖြစ်သွားပါတယ် ။
အဲဒီမှာ တွေ့ရတာကတော့ ၊ အကြမ်းဖျင်း အားဖြင့် ၊
၁ ။ ” ဝ ” တွေဟာ မွန် ခမာ မျိုးနွယ်စုကြီး ကပါ ။
၂ ။ နောက်ပိုင်းမှာ ရောက်လာတဲ့ တိဘက်တို ဘားမန်း မျိုးနွယ်စုကြီး က ၊
တိုက်ထုတ် / တွန်းထုတ် တာကြောင့် ၊ မွန် ခမာ မျိုးနွယ်စုကြီး ဟာ ၊
မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်းကို ရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
၃ ။ ” ဝ ” တွေဟာ ရှမ်းပြည်နယ်ကို ရှမ်းတွေ မရောက်လာခင် ကတည်းက ၊
အခု ရှမ်းပြည်လို့ ခေါ်နေတဲ့နေရာမှာ နေနေတာပါ ။
၄ ။ အခု ရှမ်းပြည်လို့ ခေါ်နေတဲ့နေရာကို ရှမ်းတွေ ရောက်လာတော့ ၊
ရှမ်းတွေ က ” ဝ ” တွေကို တိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက် ၊
” ဝ ” တွေဟာ တောင်ပိုင်း နှင့် မြောက်ပိုင်း ဆိုပြီး ၂ ပိုင်းကွဲထွက်သွားပြီး ၊
” ဝ ” တွေဟာ တောင်တွေပေါ် တက်နေရတဲ့ လူမျိုးတွေ ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
၅ ။ လိုရင်းကတော့ ၊ ” ဝ ” တွေဟာ အခု ရှမ်းပြည်လို့ ခေါ်နေတဲ့နေရာ ရဲ့ ၊
မူရင်း ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား အစစ်တွေ ဖြစ်ပြီး ၊
အခု ရှမ်း တွေ ၊ ဗမာ တွေ ကသာ သူတို့ရဲ့ ဒေသ ကို ကျူးကျော်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒီချိုင်းနီးစ်လိုရေးထားတာတွေ.. ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရင်အရမ်းအရမ်း.. ကျေးဇူးတင်မိမှာပဲ..
ဘယ်ပို့ပြန်ခိုင်းရမလည်း.. မသိ.. :buu:
သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့.. မွန်ခမာပြီးတော့မှ.. တိဘက်တိုဘားမန်း.. ပြီးမှ..တိုင်(ရှမ်း)လို့.. အစဉ်အတိုင်းချပြကြတယ်..။
ဘာသာတရားမှာလည်း.. မြန်မာပြည်ထဲခြေချတာ.. ဟိန္ဒူဘာသာကအရင်လို့.. ပျုခေတ်ကအိုးခွက်ကျန်..အရေးအချစ်တွေကပြထားတယ်..
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၁၀၀၀ လောက်ကမှ.. အရှင်အရဟံနဲ့အတူုတူရောက်တယ်(ယူဆရတဲ့) ဧည့်ဘာသာလို့ယူဆမိတယ်..
၁-၁၀-၁၉၆၀ နေ့မှာ ချုပ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်စာချုပ်အရ မြန်မာဘက်က ဖီလမ်၊ ဂေါ်လန်နဲ့ ကန်ဖန် ကချင်ရွာ (၃)ရွာ (စတုရန်းမိုင် ၅၉မိုင်) နဲ့ ၀ဒေသရှိ ပန်ဟုန်နဲ့ပန်လောလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နယ်မြေ (စတုရန်းမိုင် ၇၃မိုင်)ကို တရုတ်ကို ပေးခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်ဆီကနေ သတ္တုတူးဖော်ဖို့ ငှားရမ်းထားတဲ့ နမ်းဝန်းဂရန်မြေ (စတုရန်းမိုင် ၈၅မိုင်)ကိုတော့ မြန်မာဘက်ကို အပြီးလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။
(Dorothy Woodman ရဲ့ The Making of Burma)
အပြီးသတ်ကောက်ချက်ချရရင် ? ? ? ?